ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ လက်ကျန် ဓါတ်သေများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ လက်ကျန် ဓါတ်သေများ
ဂေဇက်တွေ့ဆုံပွဲ လက်ကျန် ဓါတ်သေများ
ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတဲ့ကြားထဲက အားတင်းတင်လိုက်ရတဲ့ မနေ့က ဓါတ်ပုံပိုစ့်မှာ မပြည့်မစုံ ဖြစ်ကျန်ခဲ့တာ အများကြီးပါ .. အဆိုးဆုံးက ဆုရတဲ့သူတွေ ဓါတ်ပုံတောင် တချို့ ကျန်နေခဲ့တာကိုပါပဲ .. အရမ်းအားနာပါတယ်ခင်ဗျာ … ။ဒီနေ့တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တင်လိုက်ပါတယ် .. ကျန်နေတဲ့သူတွေလဲ စိတ်ကျေနပ်ပါ ခင်ဗျာ ..
ပုံတွေကျန်နေသေးရင်လဲ တောင်းပါခင်ဗျ .. ။
နောက်တစ်ခု ပုံထဲမပါစေချင်တဲ့သူများရှိရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါ ..။ကျွန်တော်ဖျက်ပေးပါ့မယ် ..။ကျွန်တော်မရှိတဲ့အခိုက်ဆိုရင်လဲ သူကြီးကိုဖျက်ခိုင်းပါခင်ဗျ ..။ဘူဖေးပွဲကို ဘယ်သူစတင်ဖွင့်လှစ်သလဲဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးလဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
နောက်တစ်ခု ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာပထမဦးဆုံး တွေ့ရှိခင်မင်ရသူ ကိုကမ်းနဲ့ ကစည်ကို ခုပွဲမှာ မတွေ့ရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းရပါကြောင်း ..ထို့အတွက်အမှတ်ရ ကစည်ရရှိတဲ့ ဆုကို ကျွန်တော်တက်ယူပေးခဲ့ပါကြောင်း ..၊ အဲဒီ့ဆု ခင်ဗျားလက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရလို့ သတိရပေးပါ ကစည်ရေ ..။ ကုန်းပေါ်ရောက်ရင် တွေ့ချင်ပါသေးရဲ့ .. နောက်တစ်ယောက် ကလေးရဦးမယ် .. ရမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးဆိုတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဟောပြောချက်လေးလဲ မှန်ပါတယ်လို့ ..သတိတရ ပြောပါရစေ ..။
တွေ့ဆုံပွဲမှတ်တမ်းဓါတ်၇ှင်ခွေလေးလဲ အခုအချိန်ဆို လေယာဉ်ပျံစီးနေလောက်ပါပြီ ..။ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပါ သူကြီးခင်ဗျ.။။
ဘူဖေးလာကြွေးတာ တော်တော် နောက်ကျသဗျ ..
ဂေဇက် ကွမ်းတောင်ကိုင်များနှင့် ကျွန်တော့်သား
ပွဲ လုပ်တဲ့ နေ့ လေးကို
ပြန် သတိရ သွားပြီ ။
ဒီလောက် သတိထားနေတဲ့ကြားတောင် ပုံ၆ ပုံ ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်တင်လိုက်ရပါကြောင်း ..
စားစရာ ရှားလို့ …
စက္ကူတွေ လိုက်စားနေဒယ် …
ဒီမှာ တာမက် တစ်ယောက်လုံး ချိနေဒါကို …
စားဂျင်ရင် ပြော .. ယို ကျွေးမှာပေါ့လို့ …
နင့်ဂျီးဒေါ် အဲဒါ နင်စွပ်ကျယ်ပေါက်ဖို. မဲလိပ်လုပ်နေဒါဟဲ့.. အကောင်ရဲ.
ဖြတ်စရာ ဓားမရှိလို. တံတွေးစွပ် စက္ကူဖြဲနေဒါလေ………… ခွိခွိခွိ… မဲလိပ်တွေကတော့ မွှေးနေမှာပဲ.. ခွိ
ပြောဒေါ့ဒါ တော်ဘူး တော်ဘူးနဲ့ …
တားဂို ဂျစ်ရဲ့သားနဲ့ ဇွတ်ငြင်းနေဒယ် …
ကြည့်စမ်းမနွယ်ပင်က ကိုအာဂကို ပန်းကန်းတွေ အများကြီးသယ်ခိုင်းနေဒယ်။
” ကြည့်စမ်း မနွယ်ပင်က ကိုအာဂကို ပန်းကန်းတွေ အများကြီးသယ်ခိုင်းနေဒယ် ”
မဟုတ်ဘူး ။ မနွယ်ပင်က ကိုအာဂကို သင်ပေးနေတာ ။
ဒီလို လေးထောင့် ပုဂံပြားကြီးနှင့်ယူ ရတယ် တဲ့ ။
အဲဒါကြီးက များများဆံ့တယ်တဲ့ ။ ဟီ ဟိ ။
ကိုသုေ0ရော အဘဖောရော မှားတယ် ….
အမှန်က နွယ်ပင်က ဂ ကို လေးထောင့်ပုဂံရေ အ0ိုင်းရော နှစ်ခုလုံးနဲ့ ယူခိုင်းနေတာ
ဒါမှ နေ့ခင်းစာလွတ်မှာဆိုပီး ပြောပြနေတာပါ ဟိ ….
ကိုရင်မှော်ရေ.. သတိတရ ရှိနေပေလို့.. ကျေးဇူးပါဗျို့… ကျုပ်လည်း ခင်ဗျားနဲ့တကွ
အားလုံးကို အထူးတလည်သတိရနေပါတယ်။ တချိန်က ကိုရင်ဟောပေးခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားမိသားစုထဲ
မှော်ဆရာမလေး မွေးဖွားတော့မယ် သတင်းကြားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်.. (သူမွေးဖွားလာရင်တော့
ခင်ဗျားရဲ့ မိဘ လူကြီးမိဘ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်လိုက်ပါ။)
ခင်ဗျား ကျနော့်အတွက် ယူပေးထားတဲ့ ဆု ပုံနဲ့ အံစာ ယူပေးထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည်ကြည်လင်လင်လေးရှိရင်
အမှတ်တရလိုချင်လို့ sithu.marine@gmail.com ကို ပို့ပေးပါခင်ညာ.. ဓါတ်ပုံထုတ်ပီး သိမ်းထားချင်လို့…။
ဓါတ်သေဆို တခါတုန်းက ဓါတ်ရှင်ပါ…
ခညားအတွက် ဆု တက်ယူပေးထားဒါနော် ..
အဟမ်းး ဟမ်းး ဟမ်းး
ဓါတ်သေ များကို သိမ်းဆည်း သွားပါတယ်ဗျို့
ကဗျာရွတ်ကြသူများရဲ့ ဓါတ်ရှင်တွေကို ချောင်းနေပါကြောင်း
ဘူးဖေးမှာ နောက်ကတန်းစီနေသူတွေ စားလိုက်ကြရဲ့လားဟင်.. ရှေ့ကလူတွေအသားကုန်ဆွဲနေလို့
ကျနော့အစား ဓာတ်သေတွေဝေေ၀ဆာဆာရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့ ကမှော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့
ကနော်မလာနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဗျ. ခင်ဗျားလာမယ်ဆိုလို့ စိတ်ချသွားတာ
တစ်ယောက်တစ်လှည့် ရွာတာဝန် နိုင်သမျှ ထမ်းကြတာပေါ့ဗျာ ..
ကို မှော် လာမယ် ဆိုလို့ ကျုပ်လဲ သက်ပြင်း ချနိုင်တာ ဗျ . . မဟုတ်ရင် နောက်ဆံ တထင့်ထင့် နဲ့ ဗျို့  . . . .။
ရွာ့ဒါ့ပုံဆြာတွေရဲ့ ရွာပေါ်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်ကို ချီးကျူးပါတယ်။
မှော်ဆရာပို့လိုက်တဲ့ ဓာတ်ရှင် ရပါပြီ။
မနီလာစိန်က သြဂုတ်လထဲကျမှ ပြန်မှာဖြစ်လို့
မနက်ဖန်လော့ကျတဲ့အိမ်ကျလိကျလိကို ပြန်မယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့ အပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
မနက်ဖန်မှ လေယာဉ်ပျံစီးမယ့် ဓာတ်ရှင်ပါ။
အခုတော့ အလွမ်းပြေ ကြည့်ပြီးပါပြီ။
ကင်မလာနောက်က ရပ်တဲ့သူကလည်းကောင်း ၊
ကင်မလာရှေ့လူတွေကလည်း ပျော်ဖို့ကောင်း ဆိုတော့
အဲဒီနေ့က ရှန်တီစားသောက်ဆိုင်ကို တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်သွားမိသလိုပါပဲ။
ဓာတ်ရှင်လိုချင်သူများ စာအုပ်ရောင်းပေးတဲ့ နေရာတွေမှာ ရနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးပါမယ်။
အနော်တို့လဲ ဓာတ်ရှင် စောင့်နေပါတယ် လို့
ဘူဖေးပွဲကို ဘယ်သူစတင်ဖွင့်လှစ်သလဲဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးလဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဘယ်သူလဲသိကြလား….. ဟီဟိ ပေါ့
အနော်လည်း ခရက်ဒစ် ပေးသုံးဖူးတဲ့ ရီ သံပိုင်ရှင်။
ရွာ့ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေ မှော်သားသားလေးကို လုနေကြတယ်။
ပုံတွေတော့ စုံလောက်ပြီ ထင်တာပါပဲ …
​ကျေး​ကျေးဗျာ ။ ခုမှ ဝင်​လို့ရပါတယ်​
ပုံရိပ်​​တွေကို စကား​ပြော​အောင်​ ရိုက်​​ပေးခဲ့တာ ​ကျေးဇူးပါဗျာ